Kulanka Madaxweynaha iyo Wasiirrada Soomaaliya wuxu ahaa mid aan loo baahnayn (WQ: Mustafe Isse) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Kulanka Madaxweynaha iyo Wasiirrada Soomaaliya wuxu ahaa mid aan loo baahnayn (WQ: Mustafe Isse)
Inkastoo aanay cabsi iyo shaki midna igaga jirin in Madaxweyne Muuse u dabcaayo ragga la magacaabay ee la sawiran oo ay aniga nusqaan igu noqonayso inaan qarankayga liido, haddana kulankani wuxuu ahaa mid aan loo baahnayn.
Waxaana ka sii xumaa in sawir ay la galaan labada wasiir ee Farmaajo xukuumaddiisa inoogu docadocaynta badan.
Marka weliba la xasuusan yahay sidii aan gabashada lahayn ee uu Somaliland hoos ugu dhigay wasiir cawadka Arrimaha dibada Farmaajo oo si cad u sheegay in qaabilaadii madaxweyne Muuse ee dalka Guinea ay ahayd mid waxyeelaysa midnimadii iyo isu soo dhawaanshihii labada dhinac.
Inkastoo xageena kulankan uu qalbi wanaag isaga egyahay, haddana qaranka dhaawac buu ku yahay, marka la eego badheedhaha ay kooxdaasi caalamka u jeediso Laguna ladho sawirada ay Madaxweynaha JSL la galeen waxa xaqiiq ah inay uga faa’ideysan doonaan qaab siyaasi ah oo ay ku doodi doonaan in Somalidu aanay ka niyad ahayn kala go’u, balse ay tahay cadho maruun laga soo noqon doono.
Bal eeg sida wasiirul maaliyaha Farmaaajo uu boggiisa FBga ugaga faa’ideeyay la kulanka madaxeyne Muuse iyo wasiiradiisa.
Haddadan hadaf iyo ujeedo lagayn, waxa jira rag aan goolka la seegayn kubada.